» जीवन विकास लघुवित्तको आइपीओमा कति पर्यो आवेदन ?
जीवन विकास लघुवित्तको आइपीओमा कति पर्यो आवेदन ?
१५ असार २०७८, मंगलवार १२:११
काठमाडौं । जीवन विकास लघुवित्तले निष्काशन गरेको आईपिओमा १५ गुणा भन्दा बढीको आवेदन परेको छ । कम्पनीको आईपिओमा आज बिहानसम्ममा १९ लाख ४६ हजार ७ सय ३५ जना आवेदकबाट २ करोड ९३ लाख २१ हजार कित्ताको लागि आवेदन परेको हो ।
यो आईपीओ अन्तिम दिनमै १५ गुणा बढी विक्रि भैसकेकाले छिटो अवधि असार १५ गतेसम्म मात्र विक्रीमा रहनेछ । आईपीओ खरीदका लागि आवेदन दिंदा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्म माग गर्न सकिने व्यवस्था छ । कम्पनीको बिक्रि प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटलले जानकारी दिएको छ ।